Siyaasada Dowlada Somaaliya Ee Ku Aadan Dagaalka Tuk Raq iyo Colaadu Halka ay Marayso
Dagaalo soo noqnoqonaya oo si goos goos ah u dhacaya ayaa baryahan danbe ka jira Deegaanka Tuk raq, Dagaalkaas oo dhex mara Ciidamada Somaliland ee difaaca kaga jira aagaas iyo Ciidamada Dowlada Soomaaliya qaybta maamulka Puntland looga arimiyo. Dagaalkan ayaa sababay khasaare, dhaawac iyo dhimasho isugu jira, oo soo gaadhay labada dhinac.
Sida Wararku ay inta badan xaqiijinayaan, Dhinaca Dowlada Somaaliya ee Puntland maamusho ayuu weerarku ka imanyaa inta badan, waxaa sidoo kale ay saxaafadu cadaysay in ciidanka Maamul goboleedka Puntland uu khasaaruhu inta badan soo gaadhay, oo dagaalka lagaga adkaaday, dhimasho badana soo gaadhay, waxaa sidoo kale la xaqiijinayaa in maxaabiis laga qabqabtay, gaadiid dagaanlna lagaga furtay qaarna laga gubay.
Dagaalkan ayaa laga yabaa inuu waji kale yeesho, Sida waraku ay sheegayaan, Dowlada dhexe ee soomaaliya ayaa sheegtay inay ciidamo ku soo daabulayso aaga dagaalka iyo khilaafku ka jiro, taas oo keeni doonta in baaxada colaadu sii korodho, si toos ahna u badali doonta siyaasada hada lagu dagaalamayo oo gaadhsiinayso meel foolxun. Dowlada soomaaliya waxaa waajib ku ah, in ciidenkeeda Puntland looga taliyo weerarka joojiyaan, khilaafkana lagu dhameeyo hab dublaamisiyadeed oo qurux badan.
Waxaa Dagaalkan Cambaareeyay Dowladaha Beesha Caalamka oo ay ugu horayso Dowlada Jabouti oo ku baaqday in khilaafka wadahadal lagu dhameeyo.